Maqaal Ku Celis Ah: Jawaabtii BOI Ka Bixisay In Race 3 300 Crore Gaari Karin Oo Xaqiiqo Noqotay – Filimside.net
July 7, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: July 7, 2018
24-kii May 2018 shabakada Boxoffice India waxaa la weydiiyay su’aal ku aadan in filimka weyn Race 3 noqon karo mashruuc 300 Crore gaari karo.
Haddaba BOI xiligaas jawaabta ay bixisay waan idinla wadaagnay ayadoo shabakadan caalamiga ah aragti ahaan diiday in Race 3 300 Crore gaari karo weliba arimo diidayo ayay soo qaadatay.
Fadlan hoos kaga bogo su’aashii BOI la weydiiyay 24-kii May 2018 markaas oo ka harsaneyd sedex todobaad daawashada Race 3 iyo jawaabtii ay ka bixiyeen in mashruucaan 300 Crore gaari karin haatana jawaabtaas xaqiiq ayay noqotay:
Su’aasha 2-aad: Race 3 ma yahay filim 300 Crore gaari karo kadib goos gooskiisa marka la daawaday?
Jawaabta BOI: Goos gooska Race 3 waa mid wanaagsan sidoo kalena heeska kowaad ee laga soo bandhigay (Heeriye) waa Hit taasi oo ka dhigan in fagta hore filimkaan si waali ah u gadmi doono.
Sidoo kalena Race 3 waa filim awood u leh inuu 300 Crore gaaro laakiin markaan aad ayay ugu adkaan doontaa Salman Khan filimkiisa si sahlan inuu 300 Crore ku gaaro.
Caqabada Kowaad Fasaxa Ciidul Fitriga wuxuu ku aadan yahay sedexda maalmood ee ugu horeyso Race 3 la daawanayo waana arin aan wanaagsaneyn waayo waxaa fiicneyd marka sedexda maalmood uu tiyaatarada saaran yahay kadib fasaxa Ciidul Fitriga inuu u bilaawdo, waxaana xusid mudan dhamaan filimada 300 Crore gaareen ee la daawaday in fasaxyada waa weyn u gadaal mari jireen marka laga reebo Bahubali – The Conclusion.
Caqabada Labaad Race 3 kaliya wuxuu heestaa labo todobaad oo firaaqo ah kadib filimka Sanju ayaa masraxa la qeebsan doono, marka aan fiirino filimada 300 Crore iyo ka badan soo xareeyeen waxay horey u heleen ugu yaraan sedex todobaad firaaqo ah marka laga reebo Bajrangi Bhaijaan balse waa filimka loogu jecel yahay Hindiya oo dhan 15-kii sano ee ugu dambeesay asigoo noqday filim Hindiya oo dhan fariintiisii cajiibka ahayd ku qabsaday.
Sida caadiga ah xiliga Ciida Masiixiga ayaa firaaqo badan inta badana filimada xiligaas la daawado shan ilaa lix todobaad firaaqo ah ayay helaan, haddii Race 3 uu heli lahaa fursadii Tiger Zinda Hai oo kale sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu 300 Crore ku gaari lahaa iskooro waali ahna ku sameyn lahaa.
Caqabada Sedexaad: Race 3 waxaa tiyaatarada la saarayaa lix bilood kadib markii la daawaday Tiger Zinda Hai waana labo filim oo xoogaa isku fariin ah Action-ka, xarakaadka iyo qayaanada waxayna labadaan filim ka siman yihiin in Salman Khan hogaamiye ka yahay.
Sidaa darteed waa wax waali ah lix bilood gudaheeda Salman Khan inuu sameeyo labo filim min 300 Crore soo xareeyaan ayadoo labadaan filim isku fariin yihiin Action ahaan sidoo kalena daawadayaasha Action-ka xiiseeyaan kaliya tiyaatarada soo aadi doonaan.
Waxaa fiicneyd fariin ka duwan middii Tiger Zinda Hai inuu Salman la imaado haddiiba lix bilood gudaheeda uu doonayo labo filim uu hogaamiye ka yahay darajada 300 Crore gaaraan.
Haye Aqristayaal Maxaa Idinkaga Jawaab Baxay Jawaab Celintii BOI Sameesay Ka Hor Race 3 Inta Uusan Soo Bixin Iyo Sida Ay Xaqiiqo U Noqotay.
waa jawaabo sax idinkana hore ayaa noola wadaagteen anagana aragtideena waan ka dhiibanay waliba ani ahaan marwalba waxaan dhihi jirey sadexda maalin ee ugu horeesa race 3 si fiican buu ugadma lkn 300 ma gaarayo hadase Race taxanihii ahaa qaybtana ku ciyaartay 2da qaybood ee hore sheeko is haysata ayey ahaayen lkn qaybtan taxanahan race ah way bahdileen